Lajistikada Latek waxay kuxiran doontaa Anatolia Yurub
Marka la dhammaystiro qadka tareenka ee Tekirdağ-Muratlı, Latek Logistics wuxuu bilaabi doonaa u adeegida Latek Express Train oo ay la socdaan maraakiibta 15 ee Dekadda Tekirdağ. Agaasimayaasha Latek Saadka [More ...]
China, maalgelin Amarika Latin ah ee waddamada.
Shiinaha, Argentina, ayaa ku maalgelin doonta $ 10 bilyan oo doolar wadooyinka tareenka .. 10 bilyan oo doolar oo heshiis ah oo u dhexeeya labada dal ayaa la saxeexay intii lagu guda jiray booqashada Madaxweynaha Argentina Cristina Fernandez Beijing. Marka loo eego warbixinnada warbaahinta Shiinaha, 10 bilyan [More ...]
Dastuurka nidaamka tareenka ee Turkey waxa ku qoran.
Si loo waafajiyo tikniyoolajiyadda Gaadiidka Dadweynaha, daabacaad heerar qaran iyo caalami ah iyo sharci; “Shuruudaha Nidaamka Tareenka Fudud geçiril dib ayaa loo eegi doonaa oo waxaa daboolaya dhammaan nidaamyada tareenka magaalooyinka (taraamka waddada, tareenka fudud). [More ...]
Diyaaradda Rakaabka ee Ankara-Istanbul ee Xaraashka Xawaare Sare leh (YHT) Arifiye 'ma joogsan doonto. Tareenka Gobolka ayaa dhameystiray howlihii la wareegidda ee qaybta laga soo bilaabo Eskişehir ilaa Alifuatpaşa iyada oo ku xaddidan mashruuca tareenka xawaare sare leh. Alifutpaşa gudaha mashruuca [More ...]
Aqoon-is-weydaarsi casri ah oo ku saabsan Hagaajinta Nidaamka Isgaadhsiinta Magaalooyinka Magaalooyinka
Mashruuca Farsamaynta Xogta Farsamada ee Fikirka ah ee Optim Obermeyer Inc. waxaa la guddoonsiiyay Qandaraaska Nidaamka Nidaamka Waddooyinka Raadinta Magaalooyinka iyo Injineeriyadda Horumarinta Sharciga iyo yapılan qandaraas oo ay dejisay Waaxda Gaadiidka Dadweynaha. [More ...]
9. Shirkadda UITP Tareenka Tareenka ee la qabanayo
Dhibaatooyinka deegaanka iyo diirimaadka adduunka ayaa si isa soo taraysa u qabanaya ajandaha adduunka. Bulshooyinkeenu si isdaba joog ah ayey u wajahayaan dhibaatooyin la mid ah. Saraakiisha sare ee adduunka ayaa hagaajiya tayada nolosha ee adduunka oo dhan [More ...]
map TCDD tareenka ee Turkey - Turkey TCDD Rail System Map (interactive) iyo cusboonaysiinta of khadadka jira ee TCDD waxaa si joogto ah loogu daro socda daraasadda iyo sidoo kale khadadka cusub. [More ...]
Mashruucyada Tareenka Cusub ee Cusub iyo Isbeddellada Ugu Dambeeyay
-Xawaaraha sare ee sano ee ugu horreeya Turkey ee waayo-aragnimo tareen 2004 keentay in dhacdada ka dhacay la soo bixitaanka ka mid ah biraha jir ah on tareen shil. 38 waa sababta shilka sababay dhimashada dadka [More ...]
Mashruuca Tareenka ee Tokat Turhal
Jidka Tareenka ee Tokat-Turhal: Tokat wuxuu ku xiran yahay degmada Turhal ee 40 kiiloomitir oo isku xirnaanshaha khadka tareenka wuxuu ku xirnaan doonaa go'aaminta goobta la sheegay. Degmooyinka Tokat ee Turhal, Zile, Artova iyo Yeşilyurt oo ka gudbaya shabakadda tareenka [More ...]
Tareenka Taariikhda Mudanya waxaa loo keenay Bursa si loogu bandhigo: Bursa, oo ah taarikhda tariikhda Mudanya, kaas oo sannado badan u shaqeynayay, ayaa loo keenay Saldhigga Merinos ee hore si loo muujiyo. Gaadiidka tareenka wuxuu u adeegi doonaa kafateeriya rugta taariikhiga ah. [More ...]
10 Tareen oo xawaare sare leh ayaa socda
Demiryollarının modernizasyonu çerçevesinde yapımı gündeme gelen hızlı tren güzergahlarında kullanılmak amacı ile ihale çalışmaları son aşamaya getirilen hızlı tren setleri gün sayıyor. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hızlı tren projelerinde kullanılacak 10 adet [More ...]
Tareenka wuxuu noqon doonaa 630 kiiloomitir laga bilaabo Ankara ilaa Izmir
Laga bilaabo Ankara ilaa Izmir tareenka, 630 wuxuu dul joogi doonaa kiiloomitir: Mashruuca, oo loogu talagalay inuu Izmir ku xiro Ankara oo leh khadka tareenka ee heerkiisu sarreeyo, ayaa la dejin doonaa sanadkaan. Bilowga dhismaha 2006 [More ...]
« 1 ... 521 522